2019 မှာ Color of the year နဲ့လန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » 2019 မှာ Color of the year နဲ့လန်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား?
ArticleHands and NailsMake Upမိတ်ကပ် / Make Up
နှစ်တိုင်းဒီလိုအချိန်ဆိုရင် Pantone က နောက်လာမယ့်နှစ်အတွက် Color of the Year ကိုရွေးပေးနေကြပါ။ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွက် Color of the Year က Ultra Violet ဖြစ်ပြီးတော့ Cosmetic Myanmar ကနေလည်း ဒီ ultra violet look နဲ့ဘယ်လိုလန်းရမလည်းဆိုတာဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ၂၀၁၉အတွက်လည်း Color of the Year ထွက်ပေါ်လာပါပြီ၊ ဒီအရောင်လေးကတော့ Living Coral ပါတဲ့။
ဒီ ပန်းရောင်နဲ့လိမ္မော်ကြားက Coral ရောင်လေးတွေက beauty blogger တွေ makeup artist တွေကြားထဲမှာ အမြဲရေပန်းစားနေတဲ့အရောင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဘယ်အသားအရေနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကိုပိုပြီး လင်းစေတဲ့အရောင်လေးဖြစ်လို့ makeup တော်တော်များများမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အရောင်လေးလည်းဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၁၉မှာ color of the year နဲ့ လန်းချင်ရင် Coral look လေးကို အရင်က color of the year တွေထပ်အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်မှာသေချာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Pantone ရဲ့ official partner ဖြစ်တဲ့ Butter London ကလည်း အခုချိန်ကတည်းက Living Coral အရောင်စစ်စစ် makeup item လေးတွေကိုထုတ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ပျိုတို့အတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါ။ အခုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Living Coral Mini Size Nail Lacquers မှာ Living Coral အရောင်နဲ့ Crème Finish, Peel-Off-Glitter နဲ့ Crushed Diamonds ဆိုပြီး texture သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Butter London ရဲ့အဆိုအရတော့ ဒီလက်သည်းနီလေးတွေအပြင် Living Coral အရောင် Lip Gloss နဲ့ Blush Stick တွေပါဆက်ပြီးထုတ်သွားမှာမို့ ပျိုတို့အခုချိန်ကတည်းက ရင်ခုန်လို့ရအောင်သတင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
image source : https://www.instagram.com/pantone/
ဈေးနှုန်းသင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ Oriflame Product!!!
Bubble Tea ချစ်သူတွေကို မဝယ်ရမနေနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နေတဲ့ Bubble Tea Sleeping Pack
Tags: butter londoncolor of the yearcoralnail lacquerspantone